အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ဘ၀ရဲ့ နိဂုံးချုပ် တံခါးပိတ်သံ
31 Responses to “ဘ၀ရဲ့ နိဂုံးချုပ် တံခါးပိတ်သံ”
ရေးထားတာလေး ကောင်းလိုက်တာ၊ ဘ၀ရဲ့နိဂုံး တံခါးပိတ်သံ ခေါင်းစဉ်လေးလဲ မိုက်တယ်၊
ဘဝရဲ့ နိဂုံးချုပ်တံခါးပိတ်သံ လေးမှာ အဘွားကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ အထီးကျန်ဆန်လွန်းတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးသွားတဲ့ ကားဆရာ အတွက်တင် မဟုတ်ပဲ.. စာဖတ်ရသူအတွက်ပါ ခံစားရပါတယ်ဗျာ.. ကားသမားအတွက်လည်း လေးစား ဂုဏ်ယူမိပါတယ်...
အင်း လူ့ဘ၀ကလဲ ချောရေးပြသလိုဆိုရင်တော့ လူသားတွေလိုအပ်တာတွေအများကြီးဘဲနော် ၊ လူဖြစ်ရတာ
လဲ မလွယ်ပေဘူးဘဲ ၊ ချော ပိုစ့်တခုတင်တိုင်း လူသားတိုင်းမှာ လူသားပီသဘို့ တော်တော်လေးကိုလိုအပ်
သေးတာဘဲ ၊ ဘုန်းကြီးနဲ့တူတူလာလေမလားလဲ စိတ်ပူမှိပါတယ်...။
တံခါးပိတ်သံဆိုလို့ ရေဝေးက သဂြိင်္ုလ်စက်ပိတ်တဲ့အသံကြီး “ဂျိမ်း”ဆိုတာကို အလိုလို ကြားယောင်မိသွားတယ်ဝေ...
တံခါးပိတ်တော့မယ့်အချိန်.....အင်း....... ကြုံရမှာပေါ့ တစ်နေ့နေ့တော့ ကိုယ့်အတွက်မပိတ်သေးခင်မှာ ပိတ်တော့မယ့်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြည့်စည်း ပေးသင့်ကြပါတယ်လေ။ အစ်မချော....ကောင်းလိုက်တဲ့ စာစုလေးနော်.. နှစ်သက်မိတယ်။
(နှလုံးသားကို ဆုတ်ညစ်လိုက်သလို ) ...
ချောရေ... Save The Aged မှာလည်းတင်ပေးပါလားကွယ်.. ဒီပို့စ်လေးကို။
အမရေ ပေးချင်တဲ့ အတွေးရော ဘာသာပြန်ရော အရမ်းကောင်းပါတယ်.
August 16, 2010 at 12:59 AM
လူ ဆိုတာ ..
အမြဲ တန်း တစ်ယောက်ထဲပါ ဆိုတဲ့ စကား ကို သည် ပို့ (စ) လေး ဖတ်ပြီး
သတိ ရမိသွားပါတယ်၊ ကိုယ့် အလှည့် ကျ လည်း ဒီလိုပဲ ထွက်ရမှာပါပဲ။
ဘဝ နေဝင်ချိန် ရောက် လာရင် တော့ နွေးထွေး တဲ့ ယုယ မှု ကိုတော့ တကယ်လိုအပ်လှ ပါတယ်။
အပယ် ခံရ ၊ အကျင် ခံ ခဲ့ ရရင်တော့ ထိခိုက်ကြေကွဲ ဖွယ် အလွန် ကောင်း တော့ မှာပါ။
ကွေးသောလက်မဆန့်မီ ဆန့်သောလက် မကွေးမီ ဆိုတော့ ယုယတဲ့သူတွေရှိတုန်း ကိုယ့်ဘဝတံခါးပိတ်ချိန်ကြုံရပါလို၏ပေါ့.... ဟဲဟဲ
ဒီ စာ တ ပုဒ် လည်း ခံစား..ရတဲ့ ပို့စ် (စာ) ကောင်း လေး တပုဒ် ပါပဲ။
ဆက်လက်၍ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ စာပေ ခရီး ရှည် ကြာ လျှောက် လှမ်း နိုင် ပါစေ။
မချောရေ.. ဟုတ်တယ်နော်။ လူတိုင်း စောစောမသေရင်တော့ အိုရဦးမှာပါဘဲ။ အိုသွားတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာမှန်းမသိပေမဲ့ အခုအဘွားနေရာကို ၀င်ခံစားကြည့်မိတော့ စိတ်မကောင်းစရာကြီးဘဲ။ ဘ၀တိုတိုလေးကို ရတုန်းရခိုက် လူကြီးဘိုးဘွားတွေကို သနားညှာတာမှုပေးခြင်းနှင့်နားလည်မှုတို့ကို အပြည့်အ၀ပေးသင့်ပါတယ်။
တင်သမျှ ပို့စ်လေးတိုင်းမှာ တင်ပြသူရဲ့ စေတနာလေးတွေတွေ့ရပေမယ့်
ရင်ထဲမှာ ဆို့သွားတာက တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေကြောင့်လဲ ပါမယ်ထင်ရဲ့
ဖတ်လိုက်တာ မျက်ရည်တောင်ကျချင်တယ် သြ ဘဝတွေ ဘဝတွေ ခဏလေးပါ့လားနော်
တကယ်ဆို အားလုံးကိုချန်ထားခဲ့ရမယ်။ (အားလုံးရဲ့ ချန်ထားတာကို ခံရမယ်)
အသိနဲ့ ခံစားမှုပေးတဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်။
ဖတ်ပြီးတော့ ရင်ထဲ ဆို့နင့်နင့်ကြီးဗျာ...
မမြသွေးပြောသလိုပဲ Save The Aged မှာ တင်ပေးစေချင်ပါတယ် မချောရေ။
ကိုယ့်ဘဝ နိဂုံးကျရင် အဲဒီအဖွားအိုလို သာယာနိုင်ပါ့မလား ???
အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း ဘ၀တွေကို ဖြတ်သန်းခွင့်ရခဲ့အုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့။
အနှစ်မရှိပဲ ဘ၀ နိဂုံးတွေချုပ်မသွားချင်ဘူး။ (အတွေးပွါးလိုက်မိတာ)
တစ်နေ့နေ့မှာ ကြုံလာရမယ့် ဘ၀ရဲ့ နိဂုံးချုပ် တံခါးပိတ်သံလေး...
လာဖတ်သွားတယ်။ ရင်ထဲကို ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။
မရှိခဲ့ရင်.. အဲဒီအချိန်ထိရော သက်ရှိထင်ရှား ရှိပါ့အုံးမလားလို့လည်း နင့်နင့်နဲနဲ တွေးမိသွားတယ်.
ဘာသာပြန်မို့ပဲ ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်ဗျာ။
မချောရေ.. ဒီပို့စ်လေးကို သဘောကျတယ်။ အသက်ကြီးပြီ အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်လာရင်၊ ပိုပြီ အရင်ကထက် ဂရုစိုက်ပေးဖို့၊ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လည်း တစ်နေ့ အိုလာမှာ ဖြစ်တာမို့ ကိုယ်မိဘ၊ ဆွေးမျိုးတွေထဲက အသက်ကြီးသူတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖေးမကူညီသင့်တယ်လို့ ၀တ်ရည်တော့ ထင်တယ်.. :)
အင်း... ခဏခဏစဉ်းစားနေတယ်... အဲဒီအချိန်ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲပေါ့......
နှလုံးလှ ကားဆရာလေးကြောင်းဖတ်တိုင်း တမျိုးခံစားမိပါတယ်။ ဟူးးးးးးးးးးးးး
ဖတ်ရတာ စိတ်ထဲတော်တော်လေးမကောင်းဖြစ်သွားတယ်။း(
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ တင်ပြထားတာလေးက တကယ်ကို ရင်ထဲ ဆို့နင့်သွားတာပဲ
အင်း ဟုတ်တယ်နော် ဘဝနေဝင်ချိန်အတွင်းမှာ လူတိုင်းဘာတွေနဲ့ ထိတွေ့သွားချင်လဲ ဆိုတာ အဲ့ဒီ့ အချိန်ရောက်မှ သိကြ တမ်းတကြတာတွေ များတယ် အဲ့လို သူတွေကို သူတို့ ဆန္ဒအနည်းငယ်အတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် လောကကြီး မှာ ပျော်ရွှင်စရာ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲနော်....
ဘာသာပြန် အရေးအသား သိပ်ပြီး ထိမိလွန်းလို့ စိတ်ထဲ ဆို့နင့်သွားရတယ်.. အသက်ကြီးလာပြီး ဒီလို အဖြစ်မျိုးဖြစ်မှာတောင် သိပ်ကြောက်တာဘဲ..
ကိုယချင်းစာတတ်တဲ့ လူသားတွေ ထွန်းကားပါစေ.................
August 25, 2010 at 3:52 AM
I don't know when i will die.
အ ချိန် ရှိ တုန်း ကု သိုလ် ယူ တတ် ရင် ကောင်း ပါ တယ်။ သံ ဝေ ၀ ရ , တရား ရ ပြီး သံ သ ရာ ဝတ် ဆင်း ရဲ မှ လွတ် အောင် ကြိုး စား နိုင် ပါ စေ။
အား လုံး ကို လေး စား စွာ ဖြ င့် +++++